Iindleko zokuSebenza kakubi kwiWebhu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 18, 2013 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 12, 2014 Douglas Karr
Kusoloko kunzima ukumamela umntu othengisa iimveliso okanye iinkonzo ezikuxelela ukuba kuya kufuneka uthenge imveliso okanye inkonzo ukuze wenze imali engakumbi. Nge-Intanethi kuyinyani, nangona kunjalo. Iindawo ezikhawulezayo, izixhobo ezifanelekileyo, uyilo olukhulu kunye nokubonisana okuncinci kunokwenza ngokwenyani okanye kuphule inkampani kwi-intanethi.
Iindleko zokusebenza kakubi kweWebhu, I-infographic yeSmartBear, ibalaselisa iziphumo ezibi zenani elingaphantsi koyikekayo lokulayisha kunye nokusebenza kakubi kweselfowuni unyaka wonke.
tags: urhweboizinga lokuguqulwaindlekoIvenkile ye-eeCommerceIvenkileukusebenza kwewebhu
Como: Yakha usetyenziso lweSelfowuni ngaphandle kweKhowudi